ကျောက်ဖြူတွင် ခွေးရူးကိုက်၍ တစ်နေ့တည်း လူ ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ စတင် အကိုက်ခံရသည့် ကလေးမ ဒဏ်ရာပြင်?? - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ခွေးရူးကိုက်၍ တစ်နေ့တည်း လူ ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း မြို့ခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ”အခုလောလောဆယ်တော့ ခွေးရူးကိုက်လို့ လူ ၂၂ ယောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ဆေးရုံမှာကာကွယ် ဆေးထိုးနေရပါတယ်။ တစ်ယောက် ကိုကိုက်ပြီး လူတွေကလိုက်ကြ တော့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတွေကို လိုက်ကိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်” ဟု ကျောက်ဖြူမြို့နယ် စည်ပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့ရှိ ဆေးရုံအနီးမှ ကလေးမွေးထားသည့် ခွေးမတစ်ကောင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကာ မြို့ပေါ်ရှိ သမ္ဗာန်ချောင်းရပ်ကွက်၊ အစိုးရရပ်ကွက်နှင့် ငလပွေ့ရပ်ကွက်တို့တွင် ဒေသခံများကိုရန်ပြု လာခြင်းဖြစ်သည်။ ”စပြီးအကိုက်ခံရတဲ့ လေးနှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဆိုရင် မျက်နှာတစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားလို့ ရန်ကုန်ကို အရေးပေါ်ပို့လိုက်ရတယ်”ဟုလည်း ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ကိုထွန်းထွန်းနိုင်က ပြောသည်။ ခွေးရူးကိုက်၍ ဒဏ်ရာရသူများတွင် အသက် လေးနှစ်မှ ၅၆ နှစ်အထိပါဝင်ပြီး အမျိုးသား ၁၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁ဝ ဦး ဒဏ်ရာရသွား ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါခွေးမသည် အခြား ခွေးများကိုလည်း ဆက်ကိုက်လိုက်သည့်အတွက် ကျန်ခွေးများလည်း စိတ်ရူးပေါက်ကာ မြို့ခံများကို ယခုကဲ့သို့ ရန်ပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပြီး စတင်ကိုက်သည့် ခွေးမအပါအဝင် ခွေးရူး ၁၂ ကောင်ကို ယင်းနေ့ ညနေ ၅ နာရီအထိ သုတ်သင်ရှင်း လင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကာ ကျန်သည့် ခွေးရူးများနှင့် ခွေးလေခွေးလွင့်များကိုလည်း ယင်းနေ့ညနေပိုင်း တွင် ဆက်လက်သုတ်သင်ရှင်းလင်း ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ့လယ်ယာသီးနှံ ဈေးနှုန်းဈေးကွက်များမှာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ လက်ခုပ်ထဲက ရေလို??